Daawo: Xildhibaano war ka soo saaray dilka Ikraan Tahliil | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Warkii Daawo: Xildhibaano war ka soo saaray dilka Ikraan Tahliil
Daawo: Xildhibaano war ka soo saaray dilka Ikraan Tahliil
Muqdisho (Warkii.com) – Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ku metela beesha ay u dhalatay Ikraan oo la hadashay TV-ga Universal ayaa sheegtay in marnaba aan lagu qanci karin warka ay hay’adda NISA ka sheegtay Ikraan Tahliil.
Xildhibaanada ayaa si adag uga digtay wada-shaqeyn ka dhaxeyn karta kooxda Al-Shabaab iyo NISA, maadama ay ku doodeyso in gabadha ay wateen qaar kamid ah hay’adda Nabadsugida, islamarkaana laga waday xayndaabka taliska.
“Ikraan meesha lagu waayey waa xarunta Nabadsugida dhexdeeda, meel uu qof geli karo maaha, meel uu Shabaab iyo wax u dhow tagi karaan maaha. Hay’adda Nabadsugida warka ay ka sheegen Radio Muqdisho wax aan ku qancayno ma ah,” ayey tiri.
“Haddii uu jiro heshiis ka dhaxeeya dowladda iyo Shabaab, ha naloo sheego baarlamaanka ayaa ka tirsanahay, waxaa leeyahay taliska nabadsugida oo ugu horeeyo Taliye Fahad Yaasiin adigaa lagu weydiinaya, dhiigeeduna waa ku daba-taagan-yahay , waxaana lagaa rabaa meesha aad ka bixisay.”
Sidoo kale waxay ka dalbatay ra’iisul wasaare Rooble inuu soo faro-geliyo arrintaan, islamarkaana ay mudan tahay in uu si dhab ah uga howl-galo kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Hadalka Aamina ayaa waxa uu imanayaa waxyar un ka hor markii ay Al-Shabaab iska fogeysay dilka Ikraan oo ay sheegtay hay’adda Nabadsugida in ay u gacan gashay kooxdaas, kadibna ay dileen.
Hoos ka daawo xildhibaan Aamina
Previous articleDeg Deg Afduub aargudasho ah oo la xiriira dilka Ikraan Tahliil oo ka dhacay Beledweyne 03/09/2021
Next articleDEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo 3 qoddob oo culus kasoo saaray dilka Ikraan Tahliil
Goorta lagu dhawaaqayo xukunka dacwadda badda Soomaaliya oo la shaaciyey
Vinicius ayaa ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican Real Madrid bishii Ogosto sida ay Shaacisay Kooxda Real Madrid. Vinicius Junior ayaa dhaliyay shan gool shantii kulan...
RASMI: Vinicius oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican Real Madrid bishii...